Faransiiska oo Badiyay iyo Argentine oo Kuftay
Goolhayaha Australia Mathew Ryan oo dhulka jiifaya eegayana kubadi uu daba mariyay ciyaaryahanka reer France Paul Pogba
Ciyaarti hore ayaa waxay dhaxmartay xulalka France iyo Australia waxaana 2-1 ay guushu ku raacday Faransiiska.
Goolka hore waxaa France rigoore ugu dhaliyay Antoine Griezmann. Wuxuu ahaa goolki ugu horreeyay taariikhda koobka aduunka oo rigoore ah oo ansaxintiisa loo adeegsaday nidaamka tiknoolojiga casriga ah ee muuqaalka dib loogu eego khaladaadka ciyaaraha kubadda cakta.
Garsoorihi dhex-dhexaadinayay ciyaarta Andres Cunha, ayaa u baahnaaday inuu lasoo tashado garsoorayaasha muraaqabeynayay nidaamka VAR loo yaqaano ee tiknoolojiga lagu saxo khaladaadka inta ay socdaan ciyaaraha, kadib marki ciyaaryahan Josh Risdon oo difaaca uga ciyaara Australia uu jalaafeeyay Griezmann.
Waxbadan kama aysan soo wareegan marka ay Australia bareejeeysay Faransiiska, waxaana goolkaas oo ahaa rigoore shabaqa ku hubsaday kabtanka xulka Mile Jedinak, kadib marki uu kubad gacanta ku bixiyay Samuel Umtiti oo difaaca ka ciyaara.
Hase ahaatee goolka guusha ayaa siiyay xulka France xiddigooda Paul Pogba oo isna gookiisa loo baahnaaday in lagu xaqiijyo nidaamka muuqaalka tiknoolijiga ciyaaraha lagu xaqiijiyo oo ah nidaam ku cusub Koobka Aduunka.
Ciyaarta kale ee indhaha lagu wada hayay, waxay dhexmartay xulalka Argentina iyo Iceland. Lionel Messi ayaa la dhowrayay waxa u sameyn doono kol haddii laacibka ay sida aadka ah u xafiiltamaan ee Ronaldo uu shalay wacdaro ka dhigay kulanki ay xulkiisa Portugal ay barbarro 3-3 ah isla galeen dalka ay deriska yihiin ee Spain.
Ronaldo isaga ayaa saddexda goolba u dhaliyay dalkiisa Portugal. Waxaa la isweydiinayay toloow Messi intaasi ma dhaafsiin doonaa oo ma u badin doonaa.
Hase yeeshee Argentina gool ayay keeneen daqiiqadii 19-aad ee ciyaarta waxaana si qurux badan u dhaliyay weeraryahan Aguero, balse afar daqiiqo kadib ayaa waxaa goolkii babarraha u saxiixay xulka yare e Iceland ciyaaryahan Alfred Finnbogason.
Qeybti labaad ee ciyaarta ayay mar kale fadhiga ka kaceen taageerayaasha Argentina kadib marki gool-kulaad ama rigoore loo dhigay ciyaaryahan Messi, ha yeeshee Messi waxaa rigooradaasi ka qabtay goolhaye Hannes Thor Halldorsson oo noqday ninki ugu fiicnaa kulanki maanta. Ciyaariina waxay kusoo gaba gaboowday barbardhac 1-1.
Dhinaca kalana, ciyaar goor dhaweyd soo gaba gabowday oo u dhaxeysay Denmark iyo Peru ayaa waxay 1-0 guushu ku raacday xulka Denmark. Goolka guusha waxaa u saxiixay ciyaaryahan Yussuf Poulsen.
Peru waxay iska khasaariyay rigoore loo dhigay, waxaana ka qalday ciyaaryahan Christian Cueva.